Emexico ngowe-Russian Wam iplanethi
Kwi-elitsha ucategory Wam iplanethi ucela imibuzo Russian-ukuthetha nabantu ukusuka ezahlukeneyo amazwe ehlabathini. Kwisahluko sesibini edition Alina ukusuka Moscow ubalisa indlela yena waphila kweli lizwe burrito kwaye libanzi-brimmed hat Mexico. Mhlawumbi kwixesha elidlulileyo ubomi ndandisele i-Indian. Indlela ongomnye ukuba zichaza wam passion kuba Central kwaye Abemi Emelika. Ukususela lwabantwana abancinane inzala kwi-inkcubeko kunye imbali Baseamerika kwaye njengokuba foreigner bafuna ukubona abali-Indian izixeko firsthand, hayi ukusuka iincwadi. Ngo khondo lobungcali-mfundo lilonke ndingumntu umguquleli ukusuka isingesi, nokwazi-Spanish. Ngenye imini mna ke wanikela umsebenzi njengoko utyelelo isikhokelo kwi-Mexico. Ndahamba ukuya kwilizwe langaphandle kwi-ukukholosa ngokupheleleyo ukuba ndiya ngathi. Ekuqaleni konyaka, ngoko ke omnye, umntu wesithathu. Ekugqibeleni ungeniswe ngokwam ukuba ndifuna uhlala apha. Ngu beautiful ibinzana kwi-Spanish ne-ukuhamba. Literally: Chonga indlela, kwaye hayi routine. Apho waye yam yokugqibela igama ligama Castro, kwaye kwakhona. Wawa ngothando waza watshata a Mexican. Igama lakhe ngu Udavide Castro.
Kwi-Mexico stronger uluvo nepotism. Kwi-Russia, olomeleleyo usapho ties, idla phakathi vala relatives. Kwaye kwi-Mexico, usapho luloyiso: grandmothers, oomakazi, nephews, kwaye cousins. Yonke indimbane kuhlanganisa kuba dinners, weekends kwaye iiholide. Fun kwaye ezibuhlungu kunye. Apha, usapho ngu zingcwele. (Wam iplanethi phambi ndabhala malunga imisebenzi ye-Mexican mentality.) Kwi-Mexican usapho ye-segregation ka-imisebenzi. Mna cook kwaye incopho intuthuzelo, umyeni ingaba nzima artillery. Kwaye umyeni wam mna kunye umsebenzi. Jikelele, Mexican abantu bamele lokwenene. Uthando beautiful abafazi, kudla, ukukhusela, oyithandayo, onomona. Mexico ngu a, ulwaphulo-mthetho kweli lizwe, ke inyaniso. Kodwa ke zonke kuxhomekeke mmandla. Tourist iindawo ingaba kulungile guarded. Kwi umda ne-United States, kunjalo, ezinobungozi. Kum, ulwaphulo-mthetho Mexico uzuko kakhulu amandla. hayi abachaphazelekayo. Ukuphila ngokunjalo kuzo Moscow waphila. Mexican iindaba nje ngcono hayi jonga. Siphila kuyo i-cancun, kwi gated zokuhlala complex nge private yokhuseleko kwaye okulungileyo zophuhliso. Kuyinto ethandwa kakhulu kwaye safest ifomu izindlu. Kancinci kwi-outskirts yesixeko apho kungekho bustle lwezempilo, kwaye ukususela traffic kwaye kufutshane indalo. Kutshanje besiya Emexico, ukubonelelwa abantu. Thenga impahla, kuba abantwana, ukufumana incwadana yokundwendwela. Kwaye Mexicans apha kakuhle: e-United States sebenzisa ikakhulu, ulwaphulo-mthetho ezibini. Kodwa isiqingatha senkulungwane edlulileyo, Emexico waba kabini California, Arizona, Texas, enew Mexico kunye nezinye i-american States. Ngoku kukho izinto ezininzi Mexican iintsapho. Kwaye kubalulekile nokuqheleka abemi abathe na relatives apha. Thina ungathanda ukuba kuqhubeka zithungelana kwi-nangona kukho mgaqo-nkqubo. I-Mexicans kuba attitude kwi-Russian. Ngokubhekiselele Vladimir Putin.
Baya admire kuye
Nokuqheleka abemi kakhulu, ingakumbi ibhinqa nesiqingatha. Ndithi, naphi na ehlabathini kukho abaninzi kangaka beautiful kwaye intelligent abafazi. Ngexesha elinye emphasize ilizwi ebukekayo. Yintoni kwakhona cinga i-Mexicans malunga ne-Russia kwaye Russian ukufunda wethu ngokulawulwa ezi zinto. Indlela zibalisa elungileyo isikhokhelo esivela quack. Ezilungileyo sazi njani ukuba ikho ngokwabo, ukuba zithungelana kunye abakhenkethi, passionate malunga umsebenzi wethu. Wam uluvo lwam, khondo lobungcali-mfundo lilonke a guide, hayi khondo lobungcali-mfundo lilonke, kodwa vocation, ukuzonwabisa, ngokwasemoyeni impulse. Ukuba kunzima waziva, uya kuba mkhulu isikhokelo. I-isikhokelo ayikho super profitable. Kodwa ndithe ngokwaneleyo. Umsebenzi kuba nam ayikho nje indlela usamkela, kodwa kanjalo ithuba get emotions. Yintoni ungakwazi kuthenga kuba anamashumi pesos kwi-Mexico. U-tickets ukuba amaxwebhu. A bottle ka-tequila. MB ka-mobile-Intanethi. Imoto ukuhlamba kwi-nkonzo. Amahlanu-ngomzuzu inombolo incoko kunye Moscow. Isidlo sasemini kuba omnye kwezinye cheap rock. A burrito ilungiselelwe abakhenkethi. Le ayiyo classic Mexican dish. Engundoqo dish tacos: nombona tortilla, nto leyo wasongwa jikelele inyama, onions, iitumato. Kwaye zinokuphathwa chili sauce. Yintoni thina osetyenziselwa umnxeba i-Mexican soap operas, apha ngokuba telenovela. Kakhulu kubo. Akunyanzelekanga ukuba akunyanzelekanga ukuba ndiyinqaye. Kwaye bale mihla uphawu njenge Vikings asingawo isusiwe. U-engundoqo zinto kufuneka wazi malunga Mexico: stunning indalo, yamandulo imicimbi yayo, ifana ne-Russian mentality. Kwaye ezintathu engalunganga: Aztecs baba cannibals, Mexicans ingaba ngcono kunokuba Russian dlala name, kwaye ukuba Mexican utshilo (Ngoku, linda a ngomzuzu) oko kuthetha ukuba zange. (stereotypes malunga lizwe yayo abantu, yesebe eqokelelweyo Wam Iplanethi.). Kubalulekile babekholelwa ukuba kwi-Mexico inkqubo ethandwa kakhulu ukufa.
Ke nje malunga lokubhiyoza ka-Usuku lwabafileyo, nto leyo ukuzaliswa iimpawu ka-skulls kwaye skeletons. National isixwexwe kwi-imbeko, waphuma ehlabathini ezinye relatives. Elungileyo usapho iholide. Skull ibonakalisa sarcastic attitude ye-Mexicans ukuba ukufa. Kungoko bathi musani ukoyika wakhe kunye nokuba ingaba zange akwazi ezahlukeneyo umphefumlo mates. Kwi-Russia sizama ukuba ndwendwela rhoqo ngonyaka. Njenge ehlotyeni kwaye kwangoko ekwindla.
Ngokwaneleyo ixesha bonwabele Ekhaya. (Ukufunda ntoni ezintlanu izinto ilahlekile Russian emigrants ngaphesheya, inqaku kwi-Bam Iplanethi.) Ukuba ufuna ukubeka Mexican sun kwi-Russia, kuya kuba Mexico. Ukutshintsha inkangeleko i-Russians, mentality, architecture, indalo. Russia yi beautiful njengoko kunjalo. Ndithanda ukuba bahlale bobabini kukho kwaye apha. Ubomi kwelinye ilizwe yenza entsha imikhuba. Mna waba ngaphezulu tolerant kwaye calmer. Bafunda ukwamkela abantu kuba abo bamele. Wawa ngothando nendalo. Kodwa ndiza? efanayo Alina Sagittarius, nje ngoku de Castro
← Mexican abafazi - Mexican Girls - Mexican Ladies
Mexican Icacile e Mexican Cupid →
© 2019 Ividiyo incoko yeMexico